Otu esi ehichapụ Ọnọdụ WhatsApp wee laghachi na WhatsApp oge ochie | Gam akporosis
Otu esi ehichapụ Ọnọdụ WhatsApp wee laghachi na WhatsApp oge ochie
Anyị na-eji nkuzi nkuzi bara uru nke Android, na nke a, nkuzi nke m ga-akọwa nzọụkwụ site na usoro ịgbaso ihichapụ Ọnọdụ WhatsApp ma laghachi na kpochapụwo WhatsApp nke ndụ.
Lee ka o siri bụrụ ihe ezi uche dị na ya, dịka anyị ga-emetụ faịlụ sistemụ nke anyị, faịlụ XML nke ngwa WhatsApp mbụ, ịgbaso nkuzi a naanị ihe achọrọ iji zute bụ na ị nwere ihe gam akporo ọnụ nke a na-gbanyere mkpọrọgwụ Ebe ọ bụ na, dị ka m gwara gị, anyị ga-enwe ikikere ikike iji nwee ike gbanwee otu akara nke faịlụ WhatsApp XML a. Nke ahụ kwuru, ka anyị rụọ ọrụ ịgbaso ndụmọdụ m kọwara nke ọma site na vidiyo na vidiyo a na-etinye, vidiyo nke m gosipụtara gị na ị nwere ike ihichapụ ọnọdụ WhatsApp wee laghachi na eserese eserese nke eserese WhatsApp.
1 Otu esi ehichapụ Ọnọdụ WhatsApp wee laghachi na kpochapụwo WhatsApp nke ndụ
1.1 Site na mgbọrọgwụ faịlụ onye nyocha anyị na-eso usoro ndị a:
Otu esi ehichapụ Ọnọdụ WhatsApp wee laghachi na kpochapụwo WhatsApp nke ndụ
Ihe mbụ anyị ga - eme iji gbasoo usoro nkuzi a bara uru nke m na - akuziri gị kpamkpam wepu WhatsApp statuses wee laghachi na ochie ochie WhatsApp interface, bụ ya mee ndabere nke WhatsApp anyị ebe ọ bụ na nke mbụ niile ga-abụ hichapụ ihe kachasị ọhụrụ nke WhatsApp.
Ozugbo ewepụrụ ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ, anyị ga-eme ya gafee njikọ a iji budata ụdị WhatsApp nke 2.17.76 Beta, anyị na-enyere site na ntọala nke gam akporo anyị na ngalaba Nche nhọrọ iji nwee ike ịwụnye ngwa na usoro APK, nhọrọ nke ga-abụ aha nke amaghi ama ma ọ bụ amabeghị ụzọ, wee gaa n'ihu nwụnye nke a Versiondị WhatsApp 2.17.76 Beta.
Versiondị WhatsApp 2.17.76 Beta
Ugbu a, anyị na-emeghe WhatsApp ngwa, gosi anyị na nọmba ekwentị na gaba na-agbake Google Drive ndabere ma ọ bụrụ na ọ bụ ikpe. Ozugbo emere nke a Will ga - ahụ otu Ọnọdụ WhstaApp ma ọ bụ WhatsApp gara n’ihu ịpụta. Juu na ugbu a na-abịa mgbe anyị wepụrụ ya kpamkpam ka nwere kpochapụwo WhatsApp interface nke a ndụ.
Nke mbụ n'ime ihe niile ga-aga Google Play Store, chọọ WhatsApp, tinye ngwa ebe anyị ga-ahụ na a gwara anyị na e nwere ụdị ọhụrụ nke ngwa ahụ, Anyị ekwesịghị imelite ya, anyị na-abanye ebe a iji pịa ihe atọ gosipụtara n'elu aka nri na uncheck nhọrọ nke na - ekwu mmelite ngwa akpaaka.
Ozugbo emere nke a, anyị na-aga Ntọala gam akporo, Ngwa, Ngwa ebudatara ma anyị na-achọ ma pịa na ngwa WhatsApp. Ozugbo n'ime anyị pịa nhọrọ iji kpochapụ Cache ma mee ka ị kwụsị ngwa ahụ ma kwado mmechi ahụ. Nhọrọ iji kpochapụ oghere na nsụgharị Android 6.0 gaa n'ihu bụ nhọrọ Nchekwa. Kpachara anya, ehichapụla data nke ngwa ahụ ma ọ bụrụ na ịhapụghị ya dị ka arụnyere ọhụrụ ma ị ga - enyocha nọmba gị ọzọ wee budata nnabata ndabere !!.
Ugbu a bụ mgbe anyị ga-emepe Root file explorer nke nhọrọ anyị, ana m akwado Njedebe File Explorer nke bụ nke m na-eji na vidiyo nke m hapụrụ gị na mmalite nke post.
Site na mgbọrọgwụ faịlụ onye nyocha anyị na-eso usoro ndị a:
anyị na-aga n'okporo ụzọ / gịnị bụ mgbọrọgwụ nke usoro
anyị na-abanye na folda ahụ data
ọzọ anyị abanye na folda ahụ data
Anyị na-achọ nchekwa ahụ com.whatsapp anyị wee banye na ya
Anyị na-achọ nchekwa ahụ Ekekọrịta_Prefs anyị wee banye na ya
Ugbu a, anyị na-achọ faịlụ ahụ Ikenna-ezipụ, pịa na ya ma họrọ nhọrọ imeghe na ES Note Editor.
Ozugbo meghere pịa pensụl na-egosi na elu nke ES Cheta Editor ihuenyo na nweta edezi faịlụ XML.
Ugbu a, ị ga-eme chọọ akara gịnị ka ọ na-ekwu
Anyị na-ehichapụ "1" n'etiti mkpụrụokwu ahụ wee tinye "0" efu.
ihe kwesiri ka odi otua:
Anyị na-apụ na nchịkọta akụkọ site na ịpị bọtịnụ azụ ugboro abụọ na mgbe ọ jụrụ anyị ma anyị chọrọ ịchekwa anyị na-asị EE.
Ugbu a, anyị nwere ike imeghe WhatsApp ngwa ịhụ anya otú Anyị ka kpochapụrụ Ọnọdụ WhatsApp na anyị nwere interface WhatsApp mara mma ọzọ Enweghi uzo nke obi uto WhatsApp nke na-akpata oke esemokwu na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla emebeghị ka o kwenye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Otu esi ehichapụ Ọnọdụ WhatsApp wee laghachi na WhatsApp oge ochie
Huawei P10 Plus, akpa echiche
Ọnụahịa nke 1000 euro ziri ezi maka ama?